Manohana ny tombotsoan'ny dia ho an'ny mpizahatany vita vaksiny ny SKAL
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Manohana ny tombotsoan'ny dia ho an'ny mpizahatany vita vaksiny ny SKAL
Thailand dia ambany noho ny aretina COVID-19, saingy nametraka fiarovana hatrany amin'ny fizahan-tany. Manomboka amin'ny volana oktobra dia mahita vahana azo tanterahina ny Fanjakana hanokatra indray ny fizahan-tany any amin'ireo toerana fivarotan-tsidiny atsimo ho an'ireo mpitsidika voatsindrona vaksiny.
Ireo mpizahatany vita vaksiny dia afaka mitsidika an'i Phuket sy Koh Samui tsy misy famerana
SKAL Koh Samui dia manohana ny dia mora ho an'ireo mpitsidika vita vaksiny
Ny fampielezan-kevitra Rediscover Samui natomboka tamin'ny volana oktobra dia mpiorina amina klioba SKAL manerantany.
Phuket sy Koh Samui any atsimon'i Thailand dia roa amin'ireo faritra fizahan-tany fanta-daza sy miankina indrindra any Thailand.
Ny fikambanana toa an'i SKAL Koh Samui dia mitehaka sy manohana ny governemanta mikasa ny hamela ireo mpizahatany vita vaksiny tsy hiditra amin'ny filan'ny kararenine ho tonga ao amin'ireo vavahady Thai ireo.
Miaraka amin'ireo faritra roa ireo manana seranam-piaramanidina iraisampirenena, ireo faritra fizahan-tany dia vavahady mirindra izay afaka mandinika ireo vorom-pizahan-tany.
SKÅL International Koh Samui [SKÅL Samui] dia mino fa ny drafitra kasaina hatao amin'ny vaksinin'ireo Samuianina ao an-toerana, miaraka amin'ny fanandramana sy fanaovana vaksiny an'ireo mpitsangatsangana ho any Thailandy, no fomba marina mandroso aorian'ny korontana ara-toekarena iray taona ao amin'ny nosy, izay miankina betsaka amin'ny mpitsidika iraisam-pirenena.
"Ny tombony ananan'i Samui amin'ny maha-nosy azy dia ny fametrahana fanaraha-maso ampy mba hametrahana ny lalàna mifehy ny quarantine, hahafahan'ny mpandeha miverina ao anatin'ny fandaharana antsoina ankehitriny hoe Pass Pass," hoy ny filoham-pirenena SKÅL Samui, Amerikanina. hotelier James McManaman.
Mandritra izany fotoana izany dia nanolo-tena i McManaman sy ny komity mpanatanteraka vaovao hamerina amin'ny laoniny ny asa aman-draharaha amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahantany #ReDiscoverSamui izay natomboka tamin'ny volana oktobra 2020 ary nahazo fanamarihana avy amin'ny klioba Skål manerantany. Ny hetsika dia natao hanehoana ny tsara indrindra amin'ny nosy paradisa ao amin'ny Helodrano Thailand.
The #ReDiscoverSamui ny fampielezan-kevitra dia natsangana mba hitondra fanampiana eo noho eo sy fanohanana mitohy ho an'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny ataon'ny Covid. Izy io dia mirakitra andiana hetsika hanentanana ny momba ny antso ataon'ny nosy ho an'ny fizahan-tany anatiny raha mbola mihidy ny sisin-tanin'i Thailandy.
Anisan'izany ny a lahatsary vaovao mampiseho ny hatsaran-tarehy voajanahary sy ny fomba fiaina mampiavaka an'i Samui sy ireo nosy manodidina. Misy ny mahomby fanentanana amin'ny haino aman-jery fandaharan'asa niainana nosy natokana ho an'ireo bilaogera media sosialy eo an-toerana. Vantany vao misokatra ny sisin-tany, dia lasibatra ny tsena mpampihinana isam-paritra sy iraisam-pirenena.
Hatramin'izao, #ReDiscoverSamui Ny fampielezana haino aman-jery sosialy dia nahasarika mpijery maherin'ny 10 tapitrisa (ary miakatra) ary namorona fiakaran'ny vidin'ny efitrano araka ny notaterin'ny mpikambana sasany.
Mba hanampiana amin'ny fampitaovana ireo mpikambana amin'ny fahaiza-manao «fanao tsara indrindra», SKÅL Samui dia nanangana seminera maromaro ihany koa izay mikendry ny fanampiana ireo mpikambana ao aminy mandritra ny fizotrany fanarenana.
Seminera iray natolotry ny mpanorina 'CUBE Consulting' sy ny mpikambana SKÅL Samui, Philip Schaetz izay nanatanteraka atrikasa momba ny Tetikasa sy famerenana stratejika ho an'ny trano fandraisam-bahiny sy Business Travel. Ny seminera iray andro, mikendry ireo mpitantana hotely sy tompona trano, dia nifantoka tamin'ny fomba fiasa mavitrika amin'ny asa aman-draharaha sy ny fampiasana angon-drakitra amin'ny fanapaha-kevitra SMART hanatsarana ny vola miditra sy ny tombom-barotra, na mandritra na aorian'ny Covid.
"Rehefa miditra amin'ny taona faharoa amin'ny areti-mandringana Covid izao tontolo izao ary manana ny fahatsinjovana làlana miadana mankany amin'ny fanarenana, dia mirehareha i SK atL fa izy no lohalaharana amin'ny fanarenana fizahan-tany izay ilana indrindra azy." hoy i McManaman, "Amin'ity tranga ity, manampy ireo mpikambana ao aminay sy ny orinasan'izy ireo izahay handinika sy hamelombelona ny paikadim-barotra amin'ny tontolon'ny fitsangatsanganana sy fandraisana olona ankehitriny.
“Ny fampielezan-kevitray dia manasongadina ny iraka ampanaovin'ny fikambanana 'Connecting Global Tourisme'” ary manamafy ny teny filamatr'i SKÅL Int'l, “Manao raharaha eo amin'ny sakaiza”, hoy ihany izy.
SKÅL Samui dia miara-miasa akaiky amin'ny Tourist Authority of Thailand (TAT), ny Tourist Association of Koh Samui (TAKS) ary ny Thai Hotels Association amin'ny famoahana ny fampielezana #ReDiscoverSamui.